Bubble Forest Ukubazi Komphakathi - Umagazini Design
Ukubazi Komphakathi I-Bubble Forest iyisithombe somphakathi esenziwe ngensimbi engenacala. Kukhanyiswe ngamalambu e-RGB e-programmese anika amandla okwenza isithombe sibhekane ne-metamorphosis ebabazekayo lapho ilanga selishonile. Kwadalwa njengokubonisa amandla ezitshalo ukukhiqiza umoya-mpilo. Ihlathi lesihloko liqukethe iziqu / iziqu zensimbi eziyi-18 eziphetha ngomqhele ngendlela yokwakheka kwe-spherical emele i-bubble yomoya eyodwa. I-Bubble Forest ibhekisela ezimfundisweni zomhlaba kanye nalokho okwaziwa ukusuka phansi kwamachibi, izilwandle nolwandle
Igama lephrojekthi : Bubble Forest, Igama labaklami : Mirek Struzik, Igama leklayenti : Altarea.
Ukubazi Komphakathi Mirek Struzik Bubble Forest